Qiimeynta ciyaartoyda – Kooxda.com
Qiimaynta Xiddigaha Kulankii Ay Man City Xasuuqday Crystal Palace Yaa Ahaa Xiddiga Garoonka
Kooxda Man City ayaa xasuuq ba,an kula kacday kooxda Crystal Palace kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league todobaadkiisii 36-aad kana dhacay garoonka Etihad Stadium. Goolal ay dhaliyeen Silva,Kompany,De Bruyne,Sterling iyo Otamendi ayaa city ka caawiyay in ay si ku meel…
May 6, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Qiimeynta Xidigaha Arsenal Kulankii Ay Hull City Garaaceen, Kumaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxda Arsenal ayaa labo gool oo nadiif ah kaga talaabsatay dhigeeda Hull City kulan goor dhaweyd kusoo idlaaday Emirates Stadium. Sidii aad aalaaba nooga barateen kooxda.com ayaa idiin soo tabin qiimeynta ciyaartoyda Arsenal re kulankani. Qiimeyntan kooxda.com ma sameeyso balse…
February 11, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Qiimeynta Xidigaha Manchester United Kulankii Ay Xasuuqeen Dhifooda Leicester City, Kumaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxda Manchester United ayaa xasuuq ba’an u gaysatay dhigeeda Leicester City kulan ka tirsan wareegii 24aad ee horyaalka ingiriiska. Xasuuqa ay Man United u gaysatay Leicester City waxaa sabab u ahaa wiilasha kaa ah Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic iyo waliba…
February 5, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Qiimeynta Xidigaha Liverpool Kulnakii KCOM Stadium Lagusoo Dibtay Caawa, Kumaa Ugu Liiitay?
Kooxda Liverpool ayaa caawa shaarubaha dhulka loogu xiray akdib kulan 2:0 lagu muquunihay oo ka dhacay KCOM Stadium. Haatana kooxda.com ayaa idiin soo tabin xubintii xiisaha badneyd ee qiimeynta ciyaartoyda. Mignolet -5 Wuxuu khalad kulahaa goolka hore ee Hull City…
February 4, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Qiimeynta Xidigaha Liverpool Kulankii Guuldarada Xanuunka Badan Ka Gaadhay Wolves
Kooxda Liverpool ayaa guuldaro xanuun badan ka qaabishay dhigeeda Wolverhampton Wenderers kuwaasi oo marti ku ahaa Anfeild. Tababare Jurgen Klopp ayay musiibo haysataa kadib sadex kulan oo xiriir ah oo uu guuldaro qaabilay isaga oo waliba wax guul ah dhadhamin…
January 28, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Qiimeynta Xidigaha Chelsea Kulankii Ay Guusha Ka Gaareen Hull City, Yaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxda Chelsea ayaa caawa guul nafis ah ka gaartay dhigeeda Hull City oo booqasho ku timid Stamford Bridge. Haatana waxaanu idiin soo tabin xubintii xiisaha badneyd ee qiimeynta ciyaartoyda. Qimeyntu sidaad ogtihiinba waxey u dhaxeysaa 1-10. Qofkii 5 ka hooseeya…
Qiimeynta Xidigaha Arsenal Kulankii Ay Guusha Dirqiga Ajeyd Ka Gaareen Burnley, Kumaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxda Arsenal ayaa 90+6 goolka guusha ka gaartay dhigeeda Burnley kulan natiijadu kusoo idlaatay 2:1. Waxaa goolka guusha Gunners u ansixiyay Alexis Sanchez kaasi oo gool ku laad shabaqa gaarsiiyay. Hadaba sidii caadada aheyd kooxda.com ayaa idiin soo tabin qiimeynta…
Kooxda Real Madrid ayaa xagaagan loo ogolyahay inay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka adeegan karaan kadib markii ganaax labo xilli ciyaareed ahaa oo suuqa looga soo rogay lagusoo koobay kaliya hal xilli ciyaareed. Kooxda cadcadka Madrid ayaa lacagtooda u huri…
Qiimeynta Xidigaha Manchester United Kulankii Ay Barbar Dhaca La Galeen Stoke City, Kumaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxaha Stoke City iyo Man United ayaa caawa Britannia Stadium barbar dhac ku galay xilli kooxda Man United tuugtay goolka barbar dhaca kaasi oo yimid daqiiqadihii ciyaarta lagu daray. Haatana waxaanu idiin soo tabin xubintii xiisaha badneyd ee qiimeynta ciyaartoyda.…
Kooxda Liverpool ayaa galabta looga yaabsaday Anfeild xilli ay Swasea City uga soo badisay 3 gool iyo labo celis ah waxaana xusid mudan in ciyaarta Liorente iyo Firmino min labo gool u ansixiyeen labada kooxood. Haatana waxaanu idiin soo tabin…
Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa waxay isku booteeyaanba dhibcaha ku kala qeybsaday Old Trafford xilli Zlatan Ibrahimovic goor danbe soo celiyay gool uu ciyaarta ku furay James Milner. Ciyaarta ayaa kusoo idlaata barbar dhac 1:1 ah oo ay labada…
January 15, 2017 · by	Mustafa Atam · 1
Kooxda Manchester City ayaa musiibo aad u xun kala soo laabatay Goodison Park kadib markii ay afar gool oo aan celis laheyn qaabileen. Waxaanu markana idiin soo tabinaynaa xubintii qimeynta ciyaartoyda oo aad aalaaba nooga barateen. Halkaan hoose kaga bogo…
January 15, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Kooxda Chelsea oo dhigooda Leicester City ku booqatay King Power Stadium ayaa guul weyn soo gaadhay kadib markii ay sadex gool iyo waxba ku kala dhantaaleen. The Blues ayaa Diego Costa la’aan u safartay Leicester waxaana la filayay inay kunadkaan…
January 14, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Kooxda Arsenal ayaa afar gool oo aan waxba lagasoo bogin ku dubatay dhigeeda Swansea waliba iyada oo marti ugu ah Liberty Stadium. Kooxda Arsenal ayaa goolasheeda uga mahad celinaysa xidigaheeda Olivier Giroud iyo Aex Sanchez jalka labada gool ee kale…
January 14, 2017 · by	Mustafa Atam · 1
Kooxda Chelsea ayaa Stamford Bridge ku xasuuqday dhigeeda Peterborough kulan ka tirsan wareegii 3aad ee tartanka FA Cupka. Goolasha ay The Blues ku kala goosteen Peterborough ayay u kala ansixiyeen Pedro(2), Willian iyo Batshuay. Halkan Hoose Kaga Bogo…
January 8, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Kooxda Liverpool ayaa barbaro goolal la’aan ah la gashay dhigeeda Plymouth kulan ka tirsan wareegii 3aad ee FA Cupka. Wiilasha Jurgen Klopp ayaa markii 5aad gurigooda barbaro goolal la’aan ah ku galay intii uu macallinka reer German laylinayay. …
Kooxda Arsenal ayaa goor dhaweyd marti u aheyd dhigeeda Preston North end kula ka tirsanaa wareegii 3aad ee tartanka FA Cupka. Arsenal ayaa guul lasoo laabatay kulankan iyaga oo 2:1 kaga talaabsaday Preston waxeyna Gunners sidaasi ugu gudbeen wareegii…
January 7, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Koobka Waramada Africa ayuu keliya wakhti iyo geeriyi inaga xigtaa inuu ka bilaabmo wadanka Gabon oo koobkaas marti gelintiisa lagu sharfay waxaana run ahantii ka qayb galaya xiddigo dunida magac ku leh . Waxa sharaf ah in qaarada africa ay…
January 6, 2017 · by	Abdi Hamid Zaciimka · 0
Kooxda Manchester United ayaa 2:0 ku muquunisay dhigeeda Manchester United kulan ka tirsanaa wareegii 20aad ee horyaalka. Kulankan ayaa ahaa midkii ugu horeeyay oo ay sanadka cusub ciyaarto kooxda Manchester United waxeyna kusoo ciyaareen meel ka baxsan minankood iyaga…
January 2, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Toban xidig oo Kooxda Manchester City ah ayaa sadex dhibcood oo xalaal.ah ka qaatay naadiga Burnley kulan ah marti ku ahaayeen Etihad Stadium. Man City ayaa sidii la filayay guuldaradii xanuunka badneyd ee Liverpool kaso gaartay usbuucan kasoo kabsatay…
Qiimeynta Xidigaha Arsenal Kulankii Ay Guusha Ka Gaareen Crystal Palace, Kumaa Ahaa Libaaxa Garoonka?
Kooxda Arsenal ayaa caawa sanadka cusub ugu dabaal degtay guul muhiim ah iyaga oo sidoo kale kasoo kicitamay booska 4aad ee kala aareynta horyaalka iyaga oo sare u fuulay booska 3aad. Olivier Giroud iyo Alex Iwobi ayaa guusha Gunners…
Qiimeynta Ciyaartoyda Manchester United Kulankii Ay Guusha Soo Laabshada Ah Ka Gaareen Boro
Kooxda Manchester United ayaa guuleysatay kulankii 5aad oo xiriir ah waana markii ugu horaysay oo sidaan dhacdo tan iyo 2014. Wiilasha Jose Mourinho ayaa daqiiqado kooban gudahooda ku keenay 2 gool xilli gool looga hor maray waxaana goolasha ka saaciday…
December 31, 2016 · by	Mustafa Atam · 1
Qiimeynta Xidigha Reds Kulankii Ay Liverpool Xasuuqday Stoke City: Kumaa Ahaa Shumaca Garoonka?
Kooxda Liverpool ayaa guul soo labasho leh ka gartay dhigeeda Stoke City iyada oo afar gool ku muquunisay wiilasha Anfeild soo daan-daaansaday. Walow Kooxda Stoke ay goolka ku horaysay hadana wiilasha Klopp ayaa muujiyay sababta ay kamid u yihiin kooxaha…
December 27, 2016 · by	Mustafa Atam · 0
Qiimeynta Ciyaartoyda Chelsea Kulankii Bournmouth: Kumaa Ugu Xumaa Kumaa Se AHaa Libaaxa Garoonka?
Kooxda Chelsea aya guul taariikhi ah ka gaartay dhigeeda Bournmouth xilli ay guuhsodii 12aad oo xiriir ah gaareen xilli ciyaareedkan. goolasha ay Chelsea guushan ku hanatay ayay uga mahad celinayaan xidigaheeda Eden hazard(1) iyo Pedro(2). Hadaba halkaan waxaan idiinku…
December 26, 2016 · by	Mustafa Atam · 0